Online Marg | झलनाथ खनालले यसरी गरे जननेता मदन भण्डारीको घोर अपमान !
झलनाथ खनालले यसरी गरे जननेता मदन भण्डारीको घोर अपमान !
नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाल जननेता मदन भण्डारीको घोर अपमान गरेका छन् । उनले जनताको बहुदलीय जनवाद समय सान्दर्भिक नरहेकाले नेकपा एसले त्यो नमान्ने भन्दैं ठाडो अभिव्यक्ती दिएका हुन् ।
एमाले फुटेर बनेको नेकपा एसले हालसालै सम्मानीत नेता भनेर पद नै दिए लगत्तै नेता खनानलले आफ्नो पार्टीले जबज नमान्ने घोषणा गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा जबज कुनै सिद्धान्त नै नभएको भन्दै उनले त्यसलाई बोकेर हिड्न नसकिने बताएका छन् ।
एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा खनालले एमालेले जबज मान्छ हमीले मान्दैनौँ यो नै एमाले र नेकपा एस विचको फरक हो भन्ने जवाफ दिएका छन् । नेकाप एस र एमालेविच नितीमा के फरक छ बताइदिनुस् भन्ने प्रश्नमा खनालले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
खनालले भनेका छन् हामी मार्सवाद लेनीनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छौ यो विश्वव्यापी सच्चाइ हो तर एमाले जनतको बहुलीय जनवाद मान्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको त पुजीँवादी जनवाद हो हामी यसलाई बोक्न सक्दैनौँ ।
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै नेपाली माटो सुहाँउदो मार्सवाद बनाउँन खोजेको भन्दै खनालले यो कुरा आफुहरुका लागी कदापी स्विकार्य नभएको पनि बताएका छन् । खनालले यति सम्म भनेका छन् की मदन भण्डारी भन्दा पहिलेनै आफुले पार्टीको चौथो महाधिवेशनमै जबको खाका ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
पाँचौ महाधिवेशनमा मदनले जबज नाम दिएर आफुलेनै भनेको कुरा ल्याएको उनको जिकीर छ । खनालले यस्तो जिकिर गरे पछि तत्कालिन अवस्थामा मदन भणडीले जबज ल्याउँदा सबैभन्दा चर्को विरोध खनाललेनै गरेका थिए । उनले जबलाई दक्षप्रजापतीको टाउको भनेर प्रचार गरेका थिए ।
नेकपा एसलाई जबज विरोधी पार्टी भनेर लाग्दै आएको आरोप खनालको यस्तो अभिव्यक्ती सँगै पुष्टि भएको छ । एमाले विभाजन भएर नेकपा एस बन्ने वित्तीकै देखी एस पार्टीका नेताहरु जबज विरुद्ध जाइलाग्न थालेका छन् ।